Windows Sever2008 အတွက် ဆော့ဖ်၀ဲလ်လိုချင်လို့ပါ — MYSTERY ZILLION
Windows Sever2008 အတွက် ဆော့ဖ်၀ဲလ်လိုချင်လို့ပါ
June 2010 edited February 2011 in Windows Server
windows server 2008. For listening songs and for myanmar font. where can i download it?
www.dl4all.com တို ့ကိုသွား
Windows Server 2008 မှာ windows media player သုံးချင်လို့ မေးတာနဲ့ တူတယ်။
Server Manager မှာ Features ကို သွားပါ။ Add Features မှာ Desktop Experience feature ကို ထည့်ပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် windows media player သုံးလို့ရသွားပါမယ်။
မြန်မာဖောင့်အတွတ်လည်း www.mandalayalpha.com/ မှာ download ယူပြီး server မှာ install လုပ်သုံးရုံပါပဲ။ Server 2008 မှာ zawgyi-font ကို အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
windows 2008 server activation or crack ရှိရင် share ပါလားခင်ဗျာ။ online ရှာတာလဲ မတွေ့လို့ပါ။ link ရှိရင် ညွှန်ပါဦးခင်ဗျာ။
Windows Server 2008 R2 အတွက် Crack ပါ။ နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အငြိမ်ဆုံး crack ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ server 2008 စပေါ်တုန်းက crack တွေရှာပြီးစမ်းဘူးပါတယ်။ အဆင်မပြေပါဘူး။ windows genuine ဖြစ်သွားခဲ့ရင်လဲ တခြား server service တွေအလုပ်မတော့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ Server Manager မတက်တော့တာမျိုးပေါ့။ အခု R2 ထွက်တော့ Active ကခွေ၀ယ်ပြီးစမ်းကြည့်ပါတယ်။ သူထဲမှာပါတဲ့ windows loader နဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ error တက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ Google ကို အားကိုးလိုက်တာ windwos7/server 2008/server 2008 R2 တို့ကို အဆင်ပြေပြေ run နိုင်တဲ့ crack ဖိုင်တစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အောက်ကလင့်မှာ Share ပါတယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ....